प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १२ असोज २०७६)
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ७९ लाख ३९ हजार पुर्‍याएको छ । कम्पनीले १२ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव असोज ७ गते मंगलवार विशेष साधारणसभा मार्फत पारित गरी बीमा समितिले तोकेभन्दा बढी पूँजी कायम गरेको हो । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीका लागि रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्न भनेको थियो ।
यस वर्ष बोनस शेयरसँगै यसमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि रू. १ करोड १७ लाख ४२ हजार नगद लाभांश समेत दिने भएको छ । काठमाडौंमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको यस कम्पनीले सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गरिसकेको छ । कम्पनीले शाखा, उपशाखा र सम्पर्क कार्यालय गरी १४० भन्दा बढी स्थानबाट सेवा दिइरहेको छ । कम्पनीले विभिन्न १६ किसिमका जीवन बीमालेख सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहीवारको कारोबारमा कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ३२० कायम भएको छ ।
2019-09-29 - 176 view(s) - abhiyandaily